Hon. Sidie Yahya Tunis voatendry ho an'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany
Home » Travel Associations News » Hon. Sidie Yahya Tunis voatendry ho an'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany
Ny birao fizahantany afrikanina dia nanambara ny fanendrena an'i Hon. Sidie Yahya Tunis, minisitry ny fizahantany sy ny kolontsaina Sierra Leone, ho an'ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany (ATB). Izy dia hiasa ao amin'ny Birao ho mpikambana ao amin'ny Komitin'ny loholona amin'ny fizahan-tany.
Ny vinan'ny minisiteran'ny fizahantany any Sierra Leone dia ny fanovana ny firenena ho tonga fizahan-tany mahaliana sy toeran-kolontsaina. Ny renivohitra Freetown renivohitra mavitrika sy mavitrika dia miorina ao amin'ny faritra Andrefana any Sierra Leone, fehezin'ny tendrombohitra Sierra Lyoa be voninahitra miakatra ao aoriany. Ny zava-manintona azo antoka hitaona ny mpitsidika dia ny National Museum, Big Market, Gateway to Old King's Yard, ary Maroon Church.
Ny Faritany Avaratra dia paradisa ho an'ny fizahantany ara-tontolo iainana sy fizahan-tany fitsangatsanganana. Misy tandavan-tendrombohitra, havoana, lohasaha sy honahona, ahitana karazana miavaka sy tandindomin-doza. Ny sasany amin'ireo morontsiraka madio sy fotsy ary tsy misy poza tsara tarehy indrindra eto an-tany dia hita manamorona ny morontsirak'ilay firenena manamorona ny Oseana Atlantika.
Ny fahatongavan'ireo mpizahatany any Belize dia manohy manoratra fitomboana mahavariana